Ndeapi mapizi muhomwe, zvaunofanira kuziva | Ehupfumi Zvemari
Kana uchiisa mari mumusika wemasheya, pane akasiyana ehunhu hunhu, mamwe achiva anonetsa kune vanoita mari. Los Chicharros ndeavo vane yakaderera capitalisation nhanho, yakaderera mvura uye fungidziro yakajeka.
Ivo vanogona kutariswa se subsector mukati memusika wemasheya, iine zvakasarudzika zvakasarudzika izvo zvinoita kuti zvinyanye kuzivikanwa nevaponesi.
Kune vamwe mukana, kunyange iri njodzi yakawandisa uye kushayikwa kwehutsanana kune vamwe.
Kunaka kune vanofungidzira uye mune zvakajairika chiitiko chine mikana yekukakavara mune mamwe mamiriro, kunyangwe vazhinji vevanyanzvi vane maonero akafanana.
Zvinogona kuve zvakaoma kuita mashandiro nemapizi, nekuti njodzi iripamusoro yakakwira. Kunyangwe zvakadaro, kune varimari vanofarira kufamba padanho iri, vachive vanokwezva kwavari.
Kugona kukwira kwakadzika nekupfuura kubva paruoko kuenda kuruoko nekuda kwekusagadzikana kwemutengo kwavanogona kusangana nako pfupi yenguva; Kana ivo vakaguma vave nesu uye vasina kutengeswa panguva yakakodzera, kana kana kukosha kwavo kuchiderera zvakanyanya, kukanganisa kwacho kunogona kuve kwakakura.
Pane maonero uye nharo dzinopesana, asi zvakaenzana mukufarira chikamu chevatsoropodzi maererano nemitemo iyi, zvichimutsa gakava.
Tichaongorora mune ino chinyorwa hunhu uye zvimwe zvinonakidza zvinhu zveichi chiitiko pamusika wemusika.
1 Chicharros muStock Market - Tsanangudzo
3 Kuziva hunhu
4 Yakanaka kudyara kana yekufungidzira?
5 Vasina ruzivo Vatengesi Vakabatwa
Chicharros muStock Market - Tsanangudzo
Iwo maitiro ane mukana wekuonekwa zviri nyore. Makambani madiki akanyorwa pamisika yemasheya, ayo ane yakaderera mari yekushomeka zvekuti ndiwo anotarisirwa nevamiriri vezvemari uye vafungidziri vanozokanganisa zvakanyanya mutengo wadzo.
Izvi ndizvo chaizvo chikonzero kushanduka kwayo kuri nechisimba mumisika iyi. Mutengo waro kusagadzikana unoratidzwa pamusoro peyakajairwa, uchikwanisa kudzikisira 15%, asi zvakadaro uchidonha zvakaipisisa zvakatokura kupfuura izvi muzana.
Iko kuchengetedzwa uko huwandu hwemari yavo hwakadzika zvakanyanya uye hunosanganisira njodzi yakawandisa. Ivo vanotambura kushanduka kwakanyanya kwazvo mumutengo wavo uye nekudaro chichava chinhu chekufungidzira, chiri nyore kushandisa.
Iwo makambani madiki kana epakati nepakati ayo, semhedzisiro yekutaurirana kushoma, anotambura kutambura kwakasiyana musika wemasheya, vamwe vane rwendo rwakasimba pamusika wemasheya nekuda kwekuve mudiki uye zvine hukama nezvikamu zvitsva zvine kukura kwakakura kugona. Zvakare zvekusvetuka zviitiko zvekumiswa kwekubhadhara kana kuvandudza chirevo chako chemari. Iko kuwedzera kwakanaka mune muongorori zvinotarisirwa kunokanganisawo ichi chokwadi.
Iyo mhando yekushanda iyo yatingatsanangure seisina kukurudzirwa kune vanochengetedza mari, asi kune avo vane profiles vane hukasha
Inotaridzwa nekuzvidza seichicharros, nekufananidza nehove yakachipa, yemhando yepamusoro ine zita iri. Makambani anowanzo fanirwa zita iri, achibatanidzwa mumatambudziko ehupfumi anoita kuti maakaundi avo agadzikane, zvinoratidzwa mumitengo yemasheya avo.
Kambani hombe ine bhizimusi remhando yepamusoro haizotariswe sepea, uye kambani diki ine bhizinesi rakabudirira haizove kana.
Idzi mhando dzekuchengetedzeka dzinogona kuve nehukuru hwekumuka uye nekuwedzera mutengo wavo zvakanyanya munguva pfupi. Ivo vanogona zvakare kudonha kwenguva yakareba semakumi emakore.
Izvo zvinokwanisika kuve mupea kwemwedzi mishoma uye uwane kuwedzera mari yacho kagumi, asi iwe unogona kugara mairi kwemakore makumi matatu uye kurasikirwa nemari zvakanyanya.
Chaizvoizvo mukana kana mukana wekuti ubudirire mukuzadzisa zvinoshamisa munguva pfupi, izvo zvinokwezva vazhinji.
Maitiro ekufunga zvakanyanya ndeyekudzivirira muyedzo. Iwe unogona kunge uchirova kukwidziridzwa, vazhinji vanodaro, asi zvinonyanya kuitika kuti imwe mari icharasika pane yakazokundikana kuyedza.
Zvinotarisirwa kuti kunyangwe mumamiriro ezvinhu mitengo painogona kukwira zvakanyanya, zvakaoma kuhwina, sezvo vaigona kudonha nekukasira kana kupfuura zvavaikwira; kukonzera varidzi vemari vakatenga pasi kuti vavaone vachisimuka vasina kutengesa, vachitarisira kuti vacharamba vachidaro, nekukurumidza vachirwisa chokwadi chekuti vadzoka pamutengo wavakatenga, uye kwete kazhinji pazasi.
Vazhinji vanofunga kuti chinhu chakangwara pakuita kugara kure nenzizi uye kuzvidzivirira.
Inofungidzirwa chitsauko chenizi, ivo vane njodzi yakajeka kunyange yakanyanya kusimbiswa. Vanogona kutariswa sevashoma "mvura", kunyangwe kurega kuverengwa, kuve nenjodzi kune vanoita mari.
Zvinonyanya kushanduka kupfuura pizi pachavo. Mumwedzi mishoma ivo vanokwanisa kuwedzera yavo misika capitalization ne10 kana 15. Kune izvi zvese, ivo vanogarotarisirwa nevashambadziri vane hukasha zvakanyanya kana vari kuramba vakamirira zviitiko zvemusika.
Kambani isina kutarisirwa zvakanaka haisi nguva dzose Chicharro
Kune makambani madiki emari uye iwo haana kunyatso kutariswa sepea. Ivo vanogona kuwanikwa riri bhizimusi rinobatsira kusvika padanho rekuti avo vanoisa mari mazviri vanogona kunge vachiita mari irinyore, kunyanya kana vachizokura kana kufukidzwa nekambani yepamusoro mune ramangwana.
Kunyangwe chicharros makambani madiki emari, ivo vachiri makambani asingatarisirwe zvakanaka vane matambudziko akakosha ehupfumi.
Nekuda kwekuti kambani iri kutarisirwa zvisina tsarukano, izvi hazviite kuti ive pea. Kana iine yakakwenenzverwa yakakwira musika capitalisation, haizotariswe sekuchengetedzeka kwakadaro.
Izvo zvinodikanwa kuti zvese hunhu kana mamiriro ezvinhu aenderane. Ndokunge, uvepo mari yakaderera uye uve matambudziko makuru ezvehupfumi.
Nenzira yakapfupikiswa uye mukubatanidza, isu tinodonongodza mamwe maitiro ayo achabatsira kuona mhando iyi yekukosha.
Iwo achave makambani madiki, kazhinji aine zvishoma kufamba.
Misiyano mumitengo yavo yakanyanya.
Ivo vane yakaderera capitalization, uye yavo yemari yakaderera pane mamwe machengetedzo akanyorwa pane inoenderera Musika.
Makambani mune kuderera kwemari anogona kutariswa mukati meichi chikamu.
Iko kusagadzikana kwayo kuri kuwedzeredzwa, iine mutengo wakakwira huwandu nekuda kweiyo yakaderera yekutengesa vhoriyamu.
Mutengo waro unogona kufamba nekushambadzira kubva ku10 - 15%.
Maitiro ane kutenderera kushoma uye akatetepa.
Ivo ndeve makambani ane akaomesesa mamiriro emari.
Yakanaka kudyara kana yekufungidzira?
Zvinogona kuve zvinobatsira kufungidzira nemapea, kunyange zvisina kukurudzirwa. Muzviitiko zvedzimba dzekudyara idzo dzinogona kufambisa idzi tsika nemari diki diki, zvingave zvakatoshomeka.
Aya ndiwo maitiro ane mukana wekugadziriswa nyore. Uye uyu mubvunzo unogona kucherechedzwa sehumwe hunhu hwavo hwekuzivisa. Uine mashoma maodha uye mari, zvinokwanisika kuita zvekunyepedzera kufambisa iyo quote.
Izvo zvinokurudzirwa kuti aya maitiro haana kunyatso kukodzera kuisa mari, asi zvakanakira kufungidzira uye izvi kana muzvinashawo aine ruzivo rwakakwana kuti aone mhindu uye kurasikirwa kwavo
Vasina ruzivo Vatengesi Vakabatwa
Mumwe muzvinabhizimusi ane ruzivo akazvipira mukufungidzira nemapea anogara achifunga kuti "nhasi" kuita kwakati kunogona kubatsira zvakanyanya; asi kuti "mangwana" zvese zvinogona kurasikirwa.
Vazhinji vatengesi vane ruzivo rwakaganhurirwa vanozozviwana vavharirwa mukurasikirwa sezvavanokwezhwa nezvivimbiso zvekukurumidza purofiti.. Ivo vanowanzo tarisa pane zvingango batsira uye havatarise zvakakwana nezvekurasikirwa kwavangangowana.
Ngatifungidzirei kambani iyo pane imwe nguva iri kutengesa ku0.04 euros. Kana mutengo wacho ukadzokera kuma0.08 euros, tichave tichiwedzera kubheja, tichikwanisa kufunga kuti anongova masendi mana pasina kukosha kwakanyanya. Sezvo zvichinetsa kuisa kurasikirwa kwekumira nemitengo yakaderera kudaro, varimi vasina ruzivo rwakakwana kana ruzivo vanomira kuisa kumira kwerudzi urwu.
Nekubatwa mukurasikirwa, kunenge kusisiri iko kwekufungidzira mashandiro mukati mawo uye ichave inogara-nguva mari.
Iko kukanganisa kunotanga kuwanda exponentially, sezvo aya maitirwo anogona kunge achidonha kwemakore pavanopinda mukurasikirwa zvine simba seizvi, havaigona kana kudzoreredza mutengo wavo wepakutanga.
Kune vazhinji, kufungidzira nemapizi kwakafanana nekutamba iyo rotari, kunyangwe kupfuura chiitiko chekufungidzira chaiko.
Mapaizi aya ndiwo maratidziro evanodyara vane hukasha vanofarira, kwete zvakadaro avo vanochengetedza vanozotsamira zvakanyanya kushomeka yerudzi urwu nekuda kwekusachengeteka kuripo, vachiziva kuti vanogona kuwana kurasikirwa kwakanyanya muzvikamu zvishoma zvekutengesa.
Vatengesi vane ruzivo kwazvo ndevaya vanogona kutora mukana nerudzi rwekuchengetedzeka, kunyange zvichidikanwa kuti zvive pachena kuti chiitiko chine njodzi.
Izvo zvinodikanwa kuti utenge uye utenge nekuchimbidza panguva iyo panenge paine kumusoro kwetsika, zvikasadaro uchafanirwa kuchengetedza kukosha kusingazokoshe iwe kwawakabhadhara kwairi.
Kana pizi dzikachengetedzwa zvisizvo, dzinogona kuve dongo chairo, kunyangwe sezvazviri mungozi dzese, mukana wekubudirira unogara uripo
Kana kambani ikasimuka yakatwasuka uye gare gare ikawira pachiyero chimwe chete, kunyangwe ichizorega kuverengerwa, zvingaitika sei; pakadaro, zvinokwanisika kuti urambe wakabatirwa mumutengo kudzamara nguva yakwana iyo kambani ichienderera nezviyero zvakakwana uye sarudzo dzekudzokororazve kana kutengesa kune mumwe wechitatu.
Kunyangwe mapizi aigona kukosheswa zvakanyanya, kunyangwe paine mikana yakakura yekuwana mabhenefiti kupfuura ne "Blue Chips", hapana mubvunzo kuti uchave mutambo une njodzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Noticias » Ndeapi mapizi muhomwe